လိင်တူ ချစ်သူများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လိင်တူ ချစ်သူများသို့
Posted by Good Idea on Sep 6, 2010 in Creative Writing, Short Story | 15 comments
ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လိင်တူချစ်သူဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်း ကျနော့်မှာ မရှိသေးဘူး။ ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးကို၊ မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးကို ချစ်လို့ရပါတယ်။ ချစ်ကြစမ်းပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယောက်ျားတွေ မိန်းမတွေ အများကြီး။ ရိုက်သတ်လို့တောင် မကုန်ဘူး။
ဘာကြောင့် ကျား ကျားချင်း၊ မ မချင်း ချစ်ချင်ကြသတုန်း။ အဲ့လို ချစ်လို့ရော ဘာတွေများ ကောင်းကျိုး ရှိလာမတုန်း။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကျနော်က အဲဒီလိုပြောတော့ “မင်းတို့က ချစ်မှ မချစ်ဘူးတာ ဘယ်ခံစားတတ်ပါ့မလဲ”လို့ ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် လိင်တူချစ်သူနေရာက ၀င်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ သူနဲ့ ကျနော် ခန္ဒာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံချင်း တူနေတာတွေ ၊ အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားတဲ့ကိစ္စတွေ အသာထားလိုက်ဦးဗျာ။ ဒီလောကကြီးမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး အနာဂါတ်ကောင်းကျိုး သယ်ပိုးမယ့် ကိုယ့်မျိုးဆက် ရင်သွေးလေးတယောက်တောင် မချန်ခဲ့နိုင်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ဒီလိုမျိုး လိင်တူချစ်သူကိစ္စ တွေကို နားလည်မပေးနိုင်သေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျင်လည်ရမယ့် ကိုယ့်မိဘ ဆွေမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရှေ့ရေးကို တွေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာ သိသာနေပါပြီ။
စိတ်အလိုကို မလိုက်ကြပါနဲ့။ လောကကို စိတ်ကဆောင်နေတာလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောပါတယ်။ အခုလည်း ဒါတွေဖြစ်လာတာဟာ စိတ်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကို ထည့်ပြောပါရစေ။ ကျနော်က ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း ပြည်မြို့ဇာတိပါ။ ကျနော်တို့မြို့မှာ အပျိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေက သူတို့သမီးတွေကို ရည်းစားထားမှာ စိုးရိမ်တော့ ချုပ်ချယ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းထားရင် မကြိုက်ဘူး။ သူတို့နဲ့ အပြင်သွားဖို့လည်း ခွင့်မပြုဘူး။ အိမ်လာလည်ရင်လည်း နှစ်သက်လေ့မရှိကြဘူး။ အိမ်လည်လာတဲ့ လူပျိုကောင်လေးတွေဆိုလည်း“ဒီကောင် ငါ့သမီးကို ဘာမဟုတ်တာ ကြံနေသလဲ”ဆိုပြီး သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်ခံရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တဖက်မှာက ဘောပြား လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးက ယောက်ျားစိတ် ပေါက်နေတဲ့သူ (ယောက်ျားလျာ) တွေကိုတော့ “သူတို့က မိန်းကလေးချင်းပဲ။ ချစ်တာကြိုက်တာတွေ၊ လွန်ကျူးတာတွေ၊ စော်ကားတာတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဆိုပြီး မိဘက လွှတ်ထားပေးတယ်။ အပြင်သွားမယ်ဆိုလည်း သူတို့နဲ့ဆို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်မှာလာလည်ရင်လည်း ခွင့်ပြုတယ်။ တချို့ဆို အိမ်မှာအတူလာအိပ်တာတောင် ခွင့်ပြုတယ်။ နောက်တော့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်သလဲ။
အနေကြာလာတော့ သံယောဇဉ်တွေဖြစ်။ နောက်တော့ ဘောပြားတွေက ကောင်မလေးတွေကို ချစ်စကား၊ ကြိုက်စကားပြော။ (သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားလေးထင်နေတော့ ရည်းစားထားဖို့ဆို မိန်းကလေးကိုပဲ စဉ်းစားတော့တာပေါ့)။ ကောင်မလေးတွေကလည်း ဘယ်လူပျိုယောက်ျားမှ အနားကပ်ခွင့်မရတော့ ဒီဘောပြားတွေကို ယောက်ျားလေးလို ထင်ကုန်ပြီး ပြန်ကြိုက်ကုန်ကြရော။
တချို့ဘောပြားတွေများ ကျုပ်တို့ ယောက်ျားတွေထက် စွံသဗျ။ ချောပေ့ လှပေ့ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ရည်းစားထည်လဲ တွဲနိုင်တယ်။ ကောင်မလေးတွေက ဆိုင်ကယ်နောက်ကနေ ခါးကလေးဖက်လို့ ဘောပြားမောင်မောင်ကတော့ ရင်ကော့ပြီး ရှေ့ကမောင်းလို့။ ဒီကနေ့ ဒီတယောက်နဲ့တွေ့။ ဟော နောက်တပတ်ကျတော့ နောက်တယောက်ပြောင်းသွားပြန်ရော။ “ဟိုအရင်ကောင်မလေးကရော ဆိုတော့” “သိပ်အချိုးမပြေလို့ ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီ” ဆိုပဲ။ လုပ်ပေါက်က မခန့်တာ။
အဲသလိုတွေ ဖြစ်ကုန်တော့ဘာဖြစ်သလဲ။ အစပိုင်းတော့ အတူတူ ရုပ်ရှင်ကြည့်။ ကျောင်းတက်။ လျှောက်လည်ကြ၊ ချိန်းတွေ့ကြတဲ့အဆင့်ကနေ နောက်ပိုင်းတော့ မခွဲနိုင်မခွာရက်တွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ မိဘတွေက ကိုယ့်သမီးဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘဲ အရွယ်ရောက်လို့ ယောက်ျားစစ်စစ် သမက်လောင်းလည်း ရွေးရော မိန်းမချင်း လိုက်ပြေးတာ၊ ခိုးကြတာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော။ နောက်တော့ ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ပဲ လက်မှိုင်ချပြီး ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရတဲ့ဘ၀ ရောက်ကုန်တော့တယ်။ တဦးတည်းသော သမီးရှင် မိဘတွေဆို ပိုဆိုး။
အလိုလိုမှ ကိုယ့်သမီး ယောက်ျားနောက် လိုက်ပြေးရင် အရှက်ကွဲရတဲ့အထဲ မိန်းမချင်း လိုက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ စာဖတ်သူ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ မိဘတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ လူလုပ်ရဲကြပါ့မလဲ။ လိုက်ပြေးတဲ့ အတွဲကို ပတ်ဝန်းကျင် အသိအမှတ်ပြုအောင် တရားဝင် မင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့ကလည်း မဖြစ်။ လင်မယားခေါ်ရလည်း အခက်။ အီးကော်မရ၊ ပဲလှော်မရတဲ့ဘ၀တွေရောက်ကုန်ရော။
တကယ်ဆိုရင် မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်သမီးပျိုတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်ပေးရမှာပါ။ ကိုယ့်သမီးကို လာကြိုက်တဲ့ကောင်က လူဆိုးလား၊ လူကောင်းလား။ ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးလဲ အကဲခတ်။ တားသင့်တန်ရင် တား။ “သမီးအနေနဲ့ ချစ်သူရည်းစားထားမယ်ဆိုရင် အဖေတို့၊ အမေတို့ကို ခေါ်လာပြ။ အကဲခတ်ပေးမယ်” စသဖြင့် ကိုယ့်သမီးကို မှာထားပေါ့။ သင့်တော်တဲ့လူမျိုးဆိုလည်း ဘေးကနေ ထိမ်းသိမ်းပေးပြီး အလွန်အကျွံမဖြစ်ရအောင် စောင့်ရှောက်။ မိဘက အဲဒီလို အလိုက်သိရင် သားသမီးကလည်း နားလည်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မိန်းမချင်းဆိုပြီး လွှတ်ပေးထားလို့ကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဲဒီ မိန်းမချင်းချစ်ကြတဲ့ လိင်တူချစ်သူများကတော့ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်အရ ပြောရရင် မိဘတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မဆွေမျိုးတွေ ဘယ်လိုအရှက်ကွဲတာထက် သူတို့ချစ်ခြင်း မပြိုကွဲဖို့ကို ပိုအလေးထားလေ့ရျိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖြစ်သင့်တာထက် ဖြစ်ချင်တာကို ရွေးချယ်ကြတာပေါ့။ သူတို့ချင်း အတူနေရ၊ ချစ်ရတာကို ပျော်နေ။ ကြည်နူးနေတာပါ။ ဈေးသွား အတူတူ။ ဟိုတတွဲတွဲ ဒီတတွဲတွဲပေါ့။ သွားလိုက်လာလိုက်။ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့။
ကျနော်က ကုန်သည်လုပ်တော့ ကျနော့်ဆီဈေးလာဝယ်တဲ့ မိန်းမချင်း လိင်တူချစ်သူစုံတွဲရဲ့ ပုံစံကို ပြောပြချင်တယ်။ ယောက်ျားလျာဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားက ကွမ်းလေးတပျစ်ပျစ်ထွေးလို့ ရှပ်အကျီလက်တို အကွက်စိပ်ကလေးဝတ်ပြီး အောက်က ပုဆိုးဝတ်ထားတယ်။ ယောက်ျားဂိုက်ပေါ့။ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကတော့ မိန်းမပုံပေါ့။ ထမီနဲ့ ရိုးရိုးအကျီဝတ်ထားတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူက ကျနော့်ကုန်ပစ္စည်းတခုကို ကောက်ကိုင်ပြီး ဈေးမေးတယ်။ “ညီလေး ဒါဘယ်လောက်လဲ”
ကျနော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ “၂၅၀ ပါ အစ်မ”
ကျနော့်အဖြေကြားတော့ နှစ်ယောက်စလုံး မျက်နှာရှုံ့သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလုပ်တဲ့ ကိုဘောပြားက မလျော့သေးဘဲ “အိမ်က အစ်ကို့အမေက စားချင်လို့တဲ့ကွာ။ နည်းနည်းလျော့ပါဦးလား”
“ကျနော်တို့က ပုံမှန်ဈေးပဲရောင်းတာပါ။ လျော့လို့ မရတော့ဘူး အစ်မ”။
နောက်တကြိမ် အစ်မထပ်ခေါ်တော့ မိန်းမဖြစ်သူ နှာကစ်သွားတယ်။ “လာပါအစ်ကိုရယ်။ ဒီဈေးသည်က အကြောတင်းတယ်။ တခြားဆိုင်သွားဝယ်ရအောင်”တဲ့။
“ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”လို့ပဲ ကျနော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးဗျ။ ကျနော် မြှောက်ပင့်ပြီး အလိုက်အထိုက်ပြောရင် သူတို့ ၀ယ်မှာပါ။ ကျနော်အတပ်သိတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြောချင်ဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ပြောချင်ရက်နဲ့ မျိုသိပ်ထားရတဲ့အမှန်တရားတွေ များနေပြီမို့လားဗျ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်း မရှိပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။)
ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏလား မသိ ဆွဲတဲ့ ကာတွန်းတပုဒ်ကို သတိရမိတယ်။ သမီးယောက်ျရှာက မိန်းမခိုးသွားလို့ မိဘလုပ်သူက အော်ငိုနေတော့ မိတ်ဆွေလုပ်သူက မိန်းခလေးချင်းပဲ ပြဿနာ မရှိပါဘူးလို့ပြောတော့ မိဘလုပ်သူက ပြန်ပြောတာက သူ့သမီးယောက်ျရှာ ခိုးသွားတာက မိန်းမရှာ ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာတော့ ညဏ်ရှိသလိုသာ ဆက်တွေးကြည့်ကြပါ။
ငါးငပိကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဥရောပသားစစ်စစ် တစ်ယောက်ဟာ အဲ့သည်လူကို ထူးဆန်းသတ္တဝါ တစ်ကောင်အနေနဲ့ပြူးပြဲပြီး ကြည့်ပါလိမ့်မည်
အမကြီးဝဝ များအား ကြိုက်သူများကို မကြိုက်သူများက
အမကြီး ပိန်ပိန် များအား ကြိုက်သူများကို မကြိုက်သူများက
ဒီကြားထဲ တစ်ချို့ က မဲမဲကြီးများကို ပင်သဘောကြလိုက်သေး၏(အသားမဲ ပတ္တမြားခဲဆိုလား)
အခြားအခြားသော ကုန်စွာများသော အရာအကြောင်းတို့ လည်းရှိပါ၏
ကျွန်ုပ် မြင်မိသည်မှာ ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်း ဟူသော သဘော(စိတ်)၏ တည်ခြင်းပင် ဖြစ်၏
ထိုစိတ်၏ ဖြစ်တည်ခြင်းအား အားလုံးတစ်တန်းတည်း တူညီအောင် ညှိုနှိုင်းရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောလျှင်
မထောက်ခံသူများနှင့်တွေ့ ခဲ့၍ ကျွန်ူပ်အား ဝိုင်း၍ နဘန်ပေးကြပါလျှင်
ကျွန်ုပ်၏ နရင်းသည် အညာနွားလှည်းများဖြတ်သွားသည့်အလား ဖုံ တထောင်းထောင်း ထသွားမည်မှာ မလွဲ Aကန်ပင်ဖြစ်၏
ကိုယ်နဲ့ ဆန့် ကျင်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကို ဆွေးနွေး နှီးနှောတဲ့အနေနဲ့ဖလှယ် ပြောဆိုမယ်ဆိုရင် ရှိပါလိမ့်မည် အကြိုး
ဘော်ဘော်တွေဖြစ်လို့အင်မတန်ချစ်လို့ပြောတာနော်
သွားကြားကို ထိုးတဲ့အတံလေးကိုကြတော့ သွားကြားထိုးတံတဲ့
ဆက်တော့မပြောတော့ပါဘူး မသင့်တော်လို့ ပါ
ကြားထည်းကို ထိုးတဲ့အတံတွေကို ကိုယ့်ဖာသာ နာမည်ပေးကြည့်ကြလေ
ကဲ ဘယ်သူ့ ကြောင့်လည်း?
ဒယကာကြီးတို့ ရွာမှာ အခုချိန်ဆို အုန်းမောင်းဘယ်နှစ်ချက်ခေါက်ပြီလည်း
စိတ်မူမမှန်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတာဟာ ဗီဇစိတ်ထက် မိဘများအုပ်ချုပ်ပုံမှားယွင်းတာကြောင့်လဲ
အကောင်းဆုံးက ကျားက ကျားလိုနေ နွားကနွားလိုနေတာအကောင်းဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။
မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လဲ ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းလို့ဘဲပြောရုံကလွဲလို့ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
လူတွေကလည်း ခက်တော့ ခက်တယ် ပြောရင်လည်း ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဟာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေရတာဘဲ လို့ ခံယူကြတယ် အားမပေးတာ အားပေးတာထက် အဓိကတော့ စိတ်ဘဲ လို့ ထင်တာဘဲ စိတ်ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်နေကြတာဘဲလေ။ သူတို့ ဘ၀ သူတို့ နားမလည်ဘူး သူတို့ ဆန္ဒတွေ ဘဲ သူတို့ သိတယ် လူအခွင့်အရေးတော့ လူအခွင့်အရေး တပါးသော သူကို သွေးဆောင်ဖျားရောင်းမှု မပါတဲ့ လူ အခွင့်အရေးမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ် လို့ မြင်ပါတယ်
အင်း အဲဒါတွေကလည်း ရှေးဘ၀က ကုသိုလ်ကံတွေပါပဲ… ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရသလဲဆိုတာများသောအားဖြင့်သိကြမယ်လို.ထင်ပါတယ်.. ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်ကြတာပါအမှန်တော့…
‘ရှေးဘ၀က ကုသိုလ်ကံတွေပါပဲ ‘ လို့ပြောရအောင် တရားသဘောတွေကိုတော်တော်နားလည်နေလို့ ပြောနေတာလာ့း မသိလို့ မေးပါရစေ။
”ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရသလဲဆိုတာများသောအားဖြင့်သိကြမယ်လို.ထင်ပါတယ်” ခင်ဗျားကကောတကယ်သိလို့ လား။
တကယ်သိတဲ့လူက အဲလိုမတွေးလောက်ပါဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုများတွေးမလည်း မသိဘူးနော်.. တရားသဘောတော်တော်နားလည်နေမှ အဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာသိရတာမဟုတ်ဘူး.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသောအားဖြင့် သိကြပါတယ်..
အခုကမ္ဘာမှာပါ ဒီလိင်တူချစ်သူကိစ္စတွေ ခေတ်စားလာပြီနော်… ဒါက ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်… မိန်းကလေး အချင်းချင်း၊ ယောက်ျားလေး အချင်းတွဲလာ ကြည့်လို့တော့ မကောင်းတာ အမှန်ပဲ…
လူတိုင်း မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်စေပဲ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် ရှိသည် ဆိုတဲ့အတိုင်း ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောကြတာပဲလေ… ဒီထဲမှာ ကျနော့်အမြင်ကို ပြောရရင်တော့ ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေက များသောအားဖြင့် homophobia (လိင်တူချင်း ချစ်တာကို မုန်းတီးရွံရှာတဲ့ ရောဂါ) တွေများတယ်နော်… တကယ်တမ်း လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ပါ… အင်တာနက်ခေတ်မှာ သတင်းအချက်အလက်တွေဆိုတာ လက်ဖျားမှာပဲ ရှိနေပါတယ်… လိင်တူချင်း ချစ်တာကို ရောဂါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ၁၉၉၁ခုနှစ် မေလ ၁၇ရက်နေ့မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်… လိင်တူချစ်သူတွေကို စိတ်မူမမှန်တဲ့ သူလို့ဒီထဲမှာ ပြောနေတာ တွေ့ရပါတယ်… ဘယ်အချက်ကို အခြေခံပြီး ပြောလဲဆိုတာကို မတွေးတတ်ပါဘူး… ကမ္ဘာပေါ်မှာ လိင်တူချင်းကို ချစ်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ… သမ္မတရာထူးတွေကို နေရာယူထားတဲ့သူတွေ… စီးပွားရေးမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ… ဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြောမယ့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို အရင်ဆုံး လေ့လာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်… လောကကြီးကို တဖက်တည်းက မကြည့်ပဲ ဘက်စုံ နေရာစုံကနေ ကြည့်မြင်တတ်အောင် ကြိုးစားလေ့လာရင် ပိုကောင်းနိုင်မှာပါ… ကိုယ် ငပိမကြိုက်လို့ တခြားသူ ငပိကြိုက်တာကို ကြည့်မရဘူးဆိုတာမျိုးကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပါပဲ… တကယ်တော့ လိင်တူချင်း ချစ်တာဟာ ရောဂါမဟုတ်ဘူး… ပြောရရင် လိင်တူချင်း ချစ်တဲ့သူတွေကို ကြောက်ရွံ့ ရွံရှာ မုန်းတီးနေတာသာ ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်… Homosexual is notasickness… but Homophobia is sickness… တဲ့လေ… ဒီ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် လေ့လာချင်တယ် ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.coloursrainbow.com ကို ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုကြည့်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်…
ဆရာ အတ္တကျော် စကားကို ခဏငှားသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ “အားလုံး တွေးဆ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ” ပေါ့ဗျာ…
နောက်တစ်ခု… ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတဲ့ အချိန်မှာ သတိထားမိတာလေးက Lesbian အမျိုးသမီးချင်းချစ်သူ (ဘောပြား) မလေးကို ဒီဆောင်းပါးရေးတဲ့သူက မနာလိုဖြစ်နေပုံရတယ်… ဘောပြားမလေးက ကောင်းမလေးတွေ အများကြီးနဲ့ အမျိုးမျိုးတွဲနေတာတွေကို မနာလို မရှုစိတ်ဖြစ်နေပုံလည်း ရတယ်… တကယ်တော့ အမျိူးသမီးချင်း ချစ်သူ Lesbian ဆိုတာမျိုးက အမျိုးသမီးက အမျိုးသားအ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး အမျိုးသားလုံးနေထိုင်မှ Lesbian လို့ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး… အမျိုးသမီးပုံစံ ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်တယ် ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးကိုပဲ ချစ်တဲ့သူကိုလည်း Lesbian လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်… အဲဒါတွေကတော့ လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်လို့ လိုက်သတ်မှတ်ပေးနေစရာ မလိုပါဘူး… လူဆိုတာ အကြိုက်တစ်မျိုးစီပဲလေ… သူတို့ဟာသူတို့ အမျိုးသမီးချင်း ချစ်နေတာ ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ ကိုယ်တွေကို ဘာတွေများ လာပြီး ထိခိုက်နေလို့လဲ… သူတို့ချင်းချစ်တာကို ကိုယ်တွေကသာ ကိုယ်နဲ့ အကြိုက်မတူလို့ ကြည့်မနိုင် ရှုမပျော် မုန်းတီးစိတ်တွေ ၀င်နေတာလေ… တကယ်တမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစား ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ… တစ်ခုလောက်လည်း မေးချင်ပါတယ်… လိင်တူချစ်တဲ့ဟာကို ရောဂါဖြစ်နေတာ ကုသလို့ရတဲ့ဟာလို့ ပြောနေကြတယ်… အဲလိုဆိုရင် လိင်တူမကြိုက်တဲ့သူတွေကိုရော လိင်တူချင်းကို ကြိုက်လာအောင် လုပ်ယူလို့ ရနိုင်ပါ့မလား… လိင်စိတ်ဆိုတာမျိုးက မွေးကတည်းက ပါလာပြီးသား… ဘယ်သူကမှ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရွေးချယ်လို့ ရသွားတယ်လို့ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး… နောက်ပြီးတော့ ကင်းဆေးရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ လေ့လာထားတာက လူသားတွေရဲ့ ဆယ်ပုံပုံမှ တစ်ပုံမပြည့်စလောက်လေးက လိင်တူချစ်သူတွေ ရှိတာပါ… ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေပဲရှိပြီး ပျက်စီးသွားမယ်လို့ ပြောနေတဲ့စကားတွေကို အခြေအမြစ်ရှိရှိ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် သိမြင်နိုင်မှာပါ… ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားတစ်ခုကို လွယ်လွယ်မပြောကြပဲ ဖတ်ပါ မှတ်ပါ စဉ်းစား တွေးခေါ်ပါ… ပြီးမှ တဖက်သက်ကြီးပဲ အပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချ ပြောဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပဲ… ဘာဖြစ်လို့ လိင်တူချင်းကို ကြိုက်ရတာလဲ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုနားလည်အောင် သူတို့တွေရဲ့ စကားတွေ သူတို့တွေရဲ့ ခံစားချက် အသံတွေကို နားထောင်ပေးပြီးတော့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး အားလုံးလက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းမွန်မယ်လို့ ကျွန်နော့်ရဲ့ အမြင်လေးကို တင်ပြကြည့်တာပါ…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ လိင်စိတ်ခံယူချက်တစ်ခုအတွက်နဲ့ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်မှာသာထားလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ.အရည်အချင်းကိုချိုးနှိမ်လိုက်သလိုဖြစ်နေပါ့မယ်
လူတစ်ယောက်စီမှာကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးတစ်ခုစီရှိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို ကြိုက်သလိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိပါတယ်
အရေးကြီးတာက သူတစ်ပါးကို ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဖို့ပါပဲ
ဆိုတဲ့ Born this way သီချင်းစာသားလေးက တော်တော်လေးအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ် လူတိုင်းကကိုယ့်နယ်ပယ်နဲ့ ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်သလို နယ်ပယ်ချင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်နိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်
အားလုံးက အသက်တစ်ချောင်းနဲ့ မိခင်ကမွေးဖွားပေးလာတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ ဘယ်သူမှ အပိုစည်းစိမ်ပါမလာကြပါဘူး
ပညတ်ချက်တွေ ဓလေ့တွေထုံးစံတွေဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ညဉ်းပန်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ ရှိသင့်ပေမယ့် ရှေးရိုးအစဉ်အလာကို ပယ်သင့်တာလေးပယ်ကြည့်ရအောင်လား
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာ ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့ လို့ဆိုရိုးရှိပေမယ့် ပယ်သင့်တာကိုပယ် ထိန်းသိမ်းသင့်တာကိုထိန်းသိမ်းရပါမယ် တဲ့ ဒီခေတ်မှာအရင်ခေတ်က ယောင်္ကျားသားတွေ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ကြီးတွေထိုးဖို့ ပယ်ထားကြပေမယ့် အသားထဲစွဲနေအောင်ထိုးတဲ့ဆေးနည်းတွေကိုတော့ မပယ်သင့်ပါဘူး ထိန်းသိမ်းရမယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်
သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာထက် သူဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အရည်အချင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ. လိင်စိတ်ခံယူချက်ပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဆိုတာ သိသာသွားမှာပါ